युवाहरुले सञ्चालनमा ल्याए, टिभिएसको नयाँ सोरुम – sunpani.com
युवाहरुले सञ्चालनमा ल्याए, टिभिएसको नयाँ सोरुम
सुनपानी । १ कार्तिक २०७७, शनिबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – पुरानो मोटरसाइकल चढिरहनु भएको छ ? अनि त्यसलाई साटेर जिरो प्रतिशत ब्याजमा नयाँ मोटरसाइकल किन्न चाहानु हुुन्छ ? यदि यस्तो सोचमा हुनुहुन्छ भने कारकादोचोक नजिक शनिबारदेखि सञ्चालनमा आएको ग्रेस एण्ड ग्लोबल टे«निङ प्रालिमा सम्पर्क गरिहाल्नुुस् है ।
नेपालीहरुको महान पर्व दशैंलाई लक्षित गरेर प्रालिले तीन वटा सुविधा दिएको छ । नगदमा मोटरसाइकल वा स्कुटी किन्न चाहानु हुन्छ भने नौ हजार रुपैया छुट रहेको छ । फाइनान्स गरेर किन्न चाहानु हुन्छ भने आधा पैसा दिएपछि अरु ब्याज नलिई मोटरसाइकल उपलब्ध गराइने छ । अर्को अफर चाहि जुनसुकै कम्पनीको पुरानो मोटरसाइकल ल्याएर टिभिएसको नयाँ चढेर जान सक्नु हुन्छ । यसरी एक्सचेन्ज गर्दा कम्पनीले १५ हजार रुपैया अतिरिक्त उपलब्ध गराउने छ ।
जगदम्बा मोटर्सले टिभिएस कम्पनीका उत्पादनहरु बिक्री गर्दै आएको छ । जगदम्बाका क्षेत्रीय प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार, एक लाख २८ हजार नौ सयदेखि सात लाख ७९ हजार नौ सयसम्मका मोटरसाइकल उपलब्ध छन् । जगदम्बाले ५ वर्षदेखि टिभिएस मोटरसाइकल बिक्री गर्दै आएको छ । पहिलो वर्ष देशभरमा ६ हजार मोटरसाइकल बिक्री गरेको जगदम्बाले चौथो वर्षमा आइपुग्दा ४५ हजार बेचेको थियो । यो वर्ष ६५ हजार बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको क्षेत्रीय प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । टिभिएसका स्मार्ट कनेक्सन भएका मोटरसाइकल र स्कुटी बजारमा आएका छन् । त्यसले फोन, म्याचेजदेखि लोकेसन देखाउँछ । देशभरमै सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको एन्ट्रो १२५ सीसी स्कुटी पनि टिभिएसकै रहेको छ ।
टिभिएसको नेपालगञ्जमा एउटा सोरुम थियो । शनिबारदेखि अर्को एउटा थपिएको छ । विशाल श्रेष्ठ, महादेवसिंह ठकुरी, विवेक पराजुली र रणबहादुर शाही मिलेर ग्रेस एण्ड ग्लोबल टे«निङ प्रालि सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यहाँ मोटरसाइकल बेच्नेदेखि मर्मत गर्ने काम हुन्छ ।
टिभिएसको कोहलपुरमा पनि सोरुम रहेको छ । बर्दियामा गुलरिया, राजापुर र बाँसगढीमा सोरुम रहेका छन् ।
टिभिएस सोरुमा जादा अर्को एउटा फाइदा छ है ! मोटरसाइकल किने पनि नकिने पनि सोरुम गएकाहरुको नाम इन्ट्री भएपछि ऊ हरेक शुक्रबार एभिन्यूज खबरबाट छानिने बम्पर उपहार योजनामा सहभागी हुन पाउँछ । नाम छानिएकाले ७ लाख ७९ हजार ९ सय रुपैयाको मोटरसाइकल उपहार पाउँछन् ।
शनिबारदेखि खुलेको नयाँ सोरुमको नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले उद्घाटन गर्नुभयो । उद्घाटन कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार पूर्णलाल चुकेको उपस्थिति रहेको थियो ।